मधेसी क्रांति को मोमेंटम चकनाचूर पारेको मान्छे, मधेसी पार्टी हरु टुकड़ा टुकड़ा हुने घात को सूत्रधार, अहिले यत्रो क्रांति गर्नु परेको प्रमुख कारण --- त्यो व्यक्ति हो बिजय गच्छेदार। इटहरी मा एउटा आम सभा गर्छ अनि मैले क्रांति गर्दैछु आउ मसँग चिया बिस्किट खाउ भन्दै त्यसको भोलि पल्ट बालुवाटार पुग्छ।
कुनै पार्टी को नीति बदल्न सकिन्छ, टैक्टिस बदल्न सकिन्छ, तर मान्छे को चरित्र चिन्न सकिन्छ बदल्न सकिँदैन।
बिजय लाई फोरम भित्र छिर्न दिनु उपेन्द्र यादव को राजनीतिक जीवन को सबै भन्दा ठुलो गल्ती रह्यो। त्यत्रो क्रांति भयो। त्यस पछि मधेसी पार्टी हरुले मधेसमा कम्तीमा ८०% सीट जित्नुपर्ने। किन जितेन? किनभने उपेन्द्र यादव ले पार्टी लगेर बिजय गद्दार को थाप्लोमा हाल्दियो। त्यत्रो क्रांति भयो, खै संगठन कसरी बनाउने? मान्छे नै छैन भन्ने मान्छे उपेन्द्र। क्रांति का लागि सड़क मा आउने मान्छे हरुको वडा समिति बनाउ। अनि आतंरिक चुनाव बाट तल बाट माथिसम्म मान्छे थप्दै जाउ। त्यसरी बॉटम अप संगठन बनाउ। कुहियेका पार्टी का मानिस इम्पोर्ट न गर। क्रांति मा विश्वास गर।
नीति बदल्न सकिन्छ, चरित्र बदल्न सकिँदैन: प्रसंग विजय गद्दार को। त्यो मान्छे को छायाँ लाई पनि मधेसी मोर्चा ले आइन्दा कहिले आफ्नो नजिक आउन दिनु हुँदैन। होइन भने शहीद को पाप लाग्छ।
Bijay Gachhedar Constituent assembly constitution federalism Madhesh madhesi janajati kranti 2015 Nepal Terai Upendra Yadav